Imbali emfutshane yaBapopu abancinci | - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa Imbali emfutshane yaBapopu abancinci
Ngaba ukhe wayibona itreyila yeeHBO UPapa oMncinci ? Ewe unayo, yafika ngaphambili IWestworld kwaye wonke umntu ubukele IWestworld . Ukuba akukhange kubenjalo, ungayibukela apha ngasentla, kodwa nantsi into ekhawulezileyo yokuhamba kwelanga: uJude Law udlala uPius XIII (owayesakuba nguLenny Bernardo), ongupopu, kwaye ngubani omncinci omncinci xa kuthelekiswa nopapa ophakathi. Ngenxa, ngokuqinisekileyo, kwiingcinga zakhe zobutsha kunye nobomi bonke bokuba nguLenny Bernardo, uPius XIII unento entle ngokugqibeleleyo izimvo malunga nokuba kuthetha ntoni ukukhokela iCawa yamaKatolika. Wenza oBhishophu bange iinyawo zakhe! Unxiba izibuko zelanga! Akaxoxisi! Uyakwazi ukuphefumla phantsi kwamanzi!
Ngokwenyani ayicacanga ncam ukuba angaphefumla phantsi kwamanzi.HBO
Ngokusekwe kwitreyila, uninzi lwe UPapa oMncinci Amaziko ecawa amalungu aphezulu kakhulu athabatha isihogo Ngaphandle kwale Pope ubukrwada, ummangaliso Unako ukuseta iakhawunti ye-Facebook ngaphandle koncedo. Uya kuba ngupopu owoyikekayo, uKhadinali Michael Spencer, odlalwa nguJames Cromwell, uxelela uPius. Eyona yingozi kumaxesha anamhlanje.
Kodwa ke, kukho iWiFi ngaphakathi kweVatican City, akunjalo? Kufuneka kubekho, uPapa mncinci kakhulu. Uneeapps. Ke ukuba uKhadinali uMichael Spencer kunye nabahlobo bakhe kwilaphu bathathe ixesha kukhangelo olulula kuGoogle, babebonile ukuba oopopu abancinci zange baphinde basebenze. Heck, baya kuba nombulelo; UPopu Pius XIII akakho mbi kangako, ngokuthelekisa, kwaye akakho mncinci kangako. UJude Law uneminyaka engama-43 ubudala. Yiminyaka engama-23 emdala kunoPopu John XI (931-935), owayengenguye imbi Upopu, ngokungathi akukho nto-burger epheleleyo kaPopu. Ukufezekiswa kwakhe okuphawuleka kakhulu, ngokokwazi kwam, kukuba yenye ye-Popes kwimbali yokujonga njengentlanzi ebuhlungu kakhulu: Hayi, ndoda.Umbutho woPapasho lwamaKatolika eMelika
Kodwa hayi, makhe sijonge omncinci KwabaPopu abancinci, lo mfana uneminyaka eli-18 ubudala ophambeneyo ogama linguJohn XII (owazalwa ngu-Octavianus, opholile kangange-1000-pesenti kunoLenny), owayenguPopu ukusuka kwiminyaka engama-955 de kwasekufeni kwakhe ngo-964. -siqingatha Indlu yezilwanyana ubumbano kunye nesiqingatha sezisele ezingaphantsi komhlaba Wabona ilungelo lokushishina. Kwakhe Imbali u-Oltonis , ULiudprand waseCremona urekhode ubude, nde Uluhlu lolwaphulo-mthetho oluhlawuliswe umfo wasekhaya u-XII kwi-Sinodi yase-Roma ka-963, eyayiquka, kodwa ayikhawulelwanga: ukuguqula iBhodwe labaPostile libe yindawo yobufebe, ukumisela umdikoni ngaphakathi kwesitali samahashe, amashweshwe amaninzi, ukukrexeza okuninzi, amatyala umbulo, ukungqubanisa iidemon noSathana kunye nezinye iidemon ngelixa bedlala idayisi kunye nokugweba nokubulala uKhadinali. Esona sigxeko sigqibeleleyo kwisikhoji sikaPapa oMncinci sisandi sokusebeza Lo popu uyamangalisa, elandelwa kukudutyulwa kukaJude Law, njengokubeka iinwele zakhe. Ukuthelekisa, nantsi uLouis Marie Decormenin kaJohn XII, ovela Imbali epheleleyo yoPopu baseRoma: Lo mfundisi ulizothe wangcolisa usihlalo we-St Peter iminyaka elithoba yonke kwaye wayefanelwe ukubizwa ngokuba ngoyena mntu uphambili woopopu.
Ungcolisiwe . Kwaye isihogo, loo milion-esile psycho-Pope inokuba sesona sikhohlakeleyo, kodwa ubuncinci wasebenza kuphela igama elinye, ngokungafaniyo no-Benedict IX oneminyaka engama-20 ubudala: Ayyy, lmao.Ifoto nguHulton Archive / Getty Izithombe
Uzalelwe uTheophylactus waseTusculum, endiqiniseke ukuba ligama lomntu ongalunganga okungenani kwenye Abaguquleli Iimuvi, uBenedict IX ayingomnye wooPopu abancinci kodwa kuphela kwakhe obambe isikhundla amaxesha amathathu ahlukeneyo. Inqaku eliphambili: WayenguPapa kathathu kuba wayenjalo wagxothwa eRoma kabini ngokuba uPapa onezothe, onezothe. Kwaye ndiyafunga ukuba oku kuyinyani, esona sizathu sokuba uBenedict IX ayeke ukuba nguPopu kungenxa yakhe wathengisa upapa . Ngexesha elizayo xa ucaphukela umfundi wakho ongahlawulwanga ngenxa yobuvila, ndiyakucela ukuba ukhumbule uPapa owanyanzela indlela yakhe kwikota yesithathu, wakruquka, wahlawula umfana ukuba athathe isikhundla esiphakamileyo kwiCawa yamaKatolika. Nazi ezinye zezicatshulwa malunga noBenedict IX:
Kwakubonakala ngathi iidemon ezivela esihogweni, ezifihle umfundisi, zazihlala kwisihlalo sikaPeter zaza zangcolisa iimfihlelo ezingcwele zonqulo ngeendlela zakhe zokuziphatha kakubi. -Ferdinand Gregorovius, Imbali yeSixeko saseRoma kumaXesha Aphakathi .
Ubomi bakhe njengopopu babungendawo, bubi, bunempucuko, kangangokuba ndothukile xa ndicinga ngako. -UPopu Victor III, iingxoxo. (Inqaku lokuzonwabisa: UVictor III wayeneminyaka engama-60 ubudala xa kwaqala upapa, kwaye wayengu kulungile Upopu).
Ke, ukuqukumbela: Mhlawumbi masingazenzi iiPopu ezincinci?
Kukho upopu omtsha edolophini. #Umntu osemtsha ii-premieres zikaJanuwari 15 nge #HBO . pic.twitter.com/ViOPOs2Q3o
-HBO (@HBO) Nge-5 kaDisemba ngo-2016
UBarack Obama kunye noVladimir Putin bayikhuphe kwiSigaba seHlabathi
U kufunda: Iibhanki ziya kuthabatha indawo yabasebenzi abangama-200,000 ngeerobhothi ngamashumi alandelayo
I-Sweeney yazisa ngeBhili eNtsha yokuThathwa kwe-AC
Kutheni abaGxeki besamthiyile uAndrew Wyeth?
Iqela likaharry's vs shave club vs gillette
kungcono ubize uSaul ngaphambi okanye emva kokwaphula umthetho
ujane powell usaphila
indawo yowasetyhini kukuvukela